उत्तरतिर किन ढल्किन्छन् कमरेडहरु ? | सहारा टाइम्स
Home » Main-News » उत्तरतिर किन ढल्किन्छन् कमरेडहरु ?
उत्तरतिर किन ढल्किन्छन् कमरेडहरु ?
२०७५ असोज १२ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य माधव कुमार नेपालले दशैं तिहारको उपलक्ष्यमा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो ।
र, सो चियापान कार्यक्रम त्यतिबेला आयोजना गर्नुभयो, जुनबेला पार्टीका दुवैजना अध्यक्ष केपी शर्मा अ‍ोली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाहिर हुनुहुन्थ्यो । उहाँले त्यतिबेला टिप्पणी गर्नुभएको थियो, ‘पार्टीमा पनि समस्या छ, सरकार पनि व्यवस्थित भएको छैन यस अवस्थामा दुवैजना विदेश जानु राम्रो होइन ।’
सरकारको कार्यशैलीप्रति पटक प्रश्न उठाइरहने, पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो अडान राखि रहने, संसदमा समेत अध्यक्षद्वयको कार्यशैलीको विरोध गरिरहने र दुवैजना अधयक्ष एकैपटक विदेश यात्रामा गएको विषयमा पनि विरोध गर्ने नेकपाका सचिवालय सदस्य नेपाल नै सबभन्दा बढी विदेश घुम्नेमा पर्नुभएको छ ।
पटक पटक विदेश गइरहने माधवकुमार नेपालले आफू विदेशमा भएको मौका पारेर पार्टीले मनमौजी निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आउनु भएको छ ।
जब कि पार्टीको कुनै महत्वपूर्ण निर्णय लिन बैठक चलिरहेका बेला उहाँ कुनै नकुनै देशमा घुमि रहनु हुन्छ । र, फर्केपछि त्यो निर्णयको विरोध गर्नुहुन्छ । नेकपाले प्रदेश कमिटीको नेतृत्व टुंग्याउँदा उहाँ विदेशमै हुनुहुन्थ्यो तर जब उहाँ फर्के अनि विवाद खडा गर्नुभयो ।
जुन विवाद अहिलेसम्म कायमै छन् । उहाँ धेरैजसो विदेश घुमीरहेकै कारण पार्टीमा विवाद उत्पन्न पनि भएको पार्टीका नेताहरु नै बताउनुहुन्छ ।
नेता नेपालले विगत पाँच महिनामा अमेरिका, ब्राजिल, घाना, कम्बोडिया र चीन गरी पाँच वटा देशको भ्रमण गरिसकेका छन् । उनी तीनपटक त चीनकै भ्रमण गरेका छन् । माधवकुमार नेपालमात्र होइन कम्युनिस्ट पार्टीका अधिकाँश नेताहरु चीनका भ्रमण गरिसकेका छन्, एकपटक मात्र होइन, शीर्ष नेताहरु त चीनको भ्रमण पटक पटक गर्नुभएको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीका अधिकाँश नेता चीनको भ्रमण गरिसकेका छन् । नेपालमा दुई तिहाईको कम्युनिस्ट सरकार गठन भएपछि कम्युनिस्टहरुको उत्तरी छिमेकी देश चीनप्रति अलि बढी नै आकर्षित देखिएको छ । जबकी यसअघि दक्षिणी छिमेकी देश भारतप्रति आकर्षित थिए ।
देश विदेशका सञ्चारमाध्यमले तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनाव गठबन्धनदेखि पार्टी एकतासम्ममा चिनियाँ चासोले काम गरेको प्रचार गरिरहेका बेला नेकपाका नेताहरु चीन भ्रमणका लागि लाइन लाग्नु भएको छ । पहिला दुई देशबीचको भ्रमण सरकारीस्तरबाट हुन्थ्यो चाहे चीनको भ्रमण होस् वा नेपालको तर अहिले चीनका चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले पनि निमन्त्रणा दिनका थालेको छ । अहिले कम्युनिस्ट पार्टीका अधिकाँश नेताहरु चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणमा चीन भ्रमणमा गइरहनु भएको छ ।
नेकपाका अध्यक्ष ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा भारतको विरोध गर्दै चीनसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने काम गरेका थिए । देशमा नाकाबन्दी लागेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग पारवाहन सम्झौता गर्दै अन्य नाकाहरु पनि खोल्ने सहमति गर्नुभएको थियो । त्यो बेलादेखि नै चीन नेपालमा खुलेर लागेको छ । एक अर्काका देशमा दुवै देशबाट आउजाउँ बाक्लिएको छ ।
नेकपाबाटै राष्ट्रपति बन्नु भएका विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख ११ देखि चीनको भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको राज्य परिषद्का प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको निमन्त्रणामा २०७५ असार ५ देखि चीनको भ्रमण गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल लगायतका नेताहरु समेत चीनका भ्रमण गर्नुभयो ।
नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री बेइजिङमा भएको अन्तराष्ट्रिय सैन्य सम्मेलनमा भाग लिनु जानु भएको थियो । नेपाली सेनाका लागि विपद् व्यवस्थापन परिचालनका लागि १५० मिलियन चिनियाँ युआन चीनले सहयोग गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भएको थियो ।
त्यसैगरि पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा १५ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै २०७५ भदौ २९ देखि असोज ५ गतेसम्म चीनको भ्रमण गर्नुभएको थियो ।
पार्टी एकतापछि प्रवक्ता श्रेष्ठले दुई पटक चीन भ्रमण गरिसक्नु भएको छ । प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि २०७५ कात्तिक ६ गते चीन भ्रमणमा गएका थिए । चीनको ग्वाङझाओमा आयोजना गरिएको बेल्ट रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को तीन दिने बैठकमा भाग लिन श्रेष्ठको नेतृत्वमा २२ सदस्यीय टोली चीन गएको थियो । प्रवक्ता श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको टोलीमा उद्योगी व्यवसायीका साथै प्रदेश सरकारका मन्त्री एवं सांसदसमेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
त्यस्तै पार्टीका सचिवालय सदस्य एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि तीनपटक चीनको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ । नेकपा महासचिव विष्णु प्रसाद पौडेलले २०७५ चैत ३० चीनगते चीनको भ्रमण गरेका थिए । सिंहदरवारको जग्गा विवादमा पर्नुभएका महासचिव पौडेल चीन भ्रमणमा जानुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिएको थियो त्यतिबेला ।
सियान विश्वविद्यालयद्वारा स्थापना गरिएको सियान–साउथ एसियन स्ट्डी सेन्टरको उद्घाटन गर्न उहाँ चीन प्रस्थान गर्नुभएको थियो । चीनमा रहँदा उहाँले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च तहका नेताहरुसँग पनि भेटघाट गर्नुको थियो । पौडेलका साथमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र दाहाल पनि चीन भ्रमणमा हजानु भएको थियो ।
त्यसैगरि, नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ पनि चीनको भ्रमण गर्नुभयो । २०७५ चैत १३ गतेदेखि चीनको भ्रमण गर्नुभएका गुरुङले १५ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणमा जानु भएका नेता गुरुङ्ग एकसातासम्म चीनको भ्रमण गर्नुभयो ।
पार्टीको सञ्चालन विधि र पार्टी स्कुलअन्तर्गत अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रक्रियाको जानकारी गराउन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तराष्ट्रिय विभागले उहाँहरुलाई निमन्त्रणा गरेको थियो ।
भ्रमणको क्रममा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले तल्ला निकाय प्रान्त, नगर, काउन्टी तथा प्रिफेक्चर तहमा लगेर उहाँहरुलाई नेपाली नेतालाई लगेर पार्टी सञ्चालन विधि, जनताको मन जित्ने तरिका, उत्पादन प्रक्रियामा समन्वय, सैद्धान्तिक पक्ष, स्कुल विभागलगायत विषयमा अनौपचारिक प्रशिक्षण दिएको थियो ।
यसबाहेक यसबाहेक नेकपाबाटै उपराष्ट्रपति बन्नु भएका नन्दबहादुर पुन गत असोज र नेकपाकै नेता समेत रहनु भएका सभामुख, कृष्णबहादुर महरा पनि गत भदौ तेस्रो साता चीन भ्रमण गर्नुभएको थियो भने नेकपाका अर्का नेता एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित असोजमा चीनको भ्रमण गर्नुभएको थियो ।
त्यसैगरि, नेकपाका नेता एवम् कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र नेकपाका अर्का नेता एवम् गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पनि चीनको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ । नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहनु भएका कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनाल पनि गत फागुन १८ देखि २२ गतेसम्म चीनको भ्रमण गर्नुभएको थियो । मन्त्री खनाल सिचुवानको इबिनमा भएको तेस्रो अन्तराष्ट्रिय चिया सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुन त्यहाँ जानु भएको थियो ।
त्यस्तै नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव पनि दुई पटक चीनको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ ।
कम्युनिस्ट पृष्ठभूमीका समाजवादी पार्टीका नेताहरु पनि पटक पटक चीनको भ्रमण गरेको छ । यद्यपी सो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चीनको भ्रमण गर्नुभएको छैन । बरु उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट राज्यमन्त्री डा.सुरेन्द्र यादवलाई गराउनु भएको छ । आफ्ना दलका दास्रो तहका नेताहरुलाई भ्रमण गराउनु भएको छ ।
समाजवादी पार्टीका अर्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई २०७१ मा एकपटक चीनको भ्रमण गर्नुभएको थियो । उहाँ परिवारसहित चीन भ्रमणमा जानु भएको थियो । त्यसपछि उहाँ चीनको भ्रमण गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री भएको बेला समेत चीन भ्रमण समेत नगरेका बाबुराम परिवारसहित चीन भ्रमणमा गएका थिए ।
अहिलेको मन्त्रीहरुमध्ये सबभन्दा बढी विदेश भ्रमण गर्नुभएका उपेन्द्र यादव चीनको भ्रमण गर्नुभएको छैन । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष रेणु यादवको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय टोली चीन भ्रमणमा गएको थियो । चीनले काँग्रेस र राजपा नेपालका नेताहरुलाई आफ्नो देशको भ्रमण गराउन चाहेको छ तर ती दलका नेताहरु चीन जान मानेका छैनन् । काँग्रेसबाट गगन थापा र संशाक कोइरालाले मात्र चीनको भ्रमण गरेको छ ।
एक्कासि कम्युनिस्ट नेताहरूको चीन मोह बढ्नुले राजनीतिकमा बहस शुरु भएको छ । नेपालमा चीनले आफ्नो भूमिका बढाउँदै गएको छ । नेपालको उच्च तहको राजनीतिकमा चीनले आफ्नो प्रभाव देखाउनका लागि नेताहरुलाई पटक पटक चीनको भ्रमण गराउन थालेको छ । केही वर्ष अघिसम्म नेपाली राजनीतिमा खासै चासो नदेखाएको चीनले नेपाली नेताहरुको चीनको भ्रमण गराउनको कारण पनि त्यही हो ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा विदेश विभाग सचिव युवराज चौलागाईंले चीन र नेपालबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाईमा पुगेको बताउनुभयो । यो भ्रमणले सम्बन्ध झन उचाईमा पुर्याउने बताउँदै उहाँले नाकाबन्दीपछि नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध झन राम्रो भएको बताउनुभयो । उहाँले नेकपामा नेता मात्र होइन दलका नेताहरु पनि चीन भ्रमणमा गएको दावी गर्नुभयो ।